Bellerin oo guri ka iibsaday Barcelona….(Sheekada oo dab lagu sii shiday) – Gool FM
(Europe) 19 Juunyo 2017. Hector Bellerin ayaa dab ku sii shiday wararka la xiriirinaya kooxda Barcelona kaddib markii la sheegay inuu guri ka iibsaday magaalada Barcelona.
Sanadii la soo dhaafay uun ayay ahayd markii uu 22-jirka heshiis waqti dheer ah la saxiixday Gunners si looga celiyo xiisaha kaga imaanaya Manchester City iyo Barca.
Warsidaha Sport ee dalka Spain ayaa iminka warinaya in Bellerin uu guri ka iibsaday Catalan coast, waalidkiis oo markii hore Ingiriiska ula soo guuray ayaa lagu wadaa inay dib u laabtaan oo ay degaan guriga cusub.
Wararka ayaa soo jeedinaya in xiddiga reer Spain uu doonayo inuu ku biiro camaaliqada La Liga, iyadoo tababaraha cusub ee Barca Ernesto Valverde uu doonayo inuu daafac cusub oo garabka midig ku soo biiriyo kooxdiisa.
Macallinka reer France ee Gunners ayay ka go’naan doontaa inuu sii xafito Bellerin iyadoo ay jirto inuu qaab ciyaareed liito galayay daafaca dhammaadkii kal ciyaareedka.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa dhexlay booska Bellerin tan iyo sidii uu Wenger ugu wareegay shaxda 3-5-2 ee dhammaadka xilli ciyaareedkii tagay.
22-jirka ayaa iminka qeyb ka ah shaxda xulka Spain ee 21-jirada ku mataleysa European Championships wuxuuna ka soo muuqday kulankii ay sabtidii 5-0 uga adkaadeen Macedonia.